Ma Wo Bo Nyɛ Duru—Yehowa Ka Wo Ho! | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Colombian Sign Language Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Mexican Sign Language Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uzbek Venda Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
“Ma wo bo nyɛ duru na wo ho nyɛ den . . . Yehowa wo Nyankopɔn ka wo ho.”—YOS. 1:9.
Dɛn na na ɛsɛ sɛ Yosua yɛ na wanya gyidi ne akokoduru kɛse?
Akokoduru bɛn na ebinom daa no adi a ɛka wo koma paa?
Hena na wususuw sɛ ne gyidi ne n’akokoduru betumi aboa wo wɔ asɛnka adwuma no mu?
1, 2. (a) Su bɛn na ɛbɛboa yɛn ma yɛagyina sɔhwɛ ano? (b) Dɛn ne gyidi? Ma mfatoho.
YEHOWA som ma yɛn ani gye. Nanso yehu amane te sɛ nnipa nyinaa. Ɛtɔ da bi mpo a ‘trenee nti yehu amane.’ (1 Pet. 3:14; 5:8, 9; 1 Kor. 10:13) Yehia gyidi ne akokoduru na yɛatumi agyina sɔhwɛ a ɛte saa ano.
2 Dɛn ne gyidi? Ɔsomafo Paulo kyerɛwee sɛ: “Gyidi ne awerɛhyem a yɛde twɛn biribi a yɛn ani da so, nneɛma a yenhu ho adanse a ɛda adi pefee.” (Heb. 11:1) Bible foforo ka sɛ: “Gyidi ne nneɛma a yɛn ani da so ho adanse krataa. Gyidi ne sɛ yebenya awerɛhyem sɛ nneɛma a yenhu no bɛba.” (The Simple English Bible) Sɛ yɛwɔ agyapade bi ho adanse krataa a, ɛma yɛn ahotoso sɛ agyapade no yɛ yɛn dea. Esiane sɛ yegye di sɛ asɛm biara a Onyankopɔn aka bɛbam nti, ɛte sɛ nea yɛwɔ agyapade bi ho adanse krataa. Yɛn gyidi ma yenya ahotoso sɛ Onyankopɔn bɔhyɛ a yɛn ani da so nyinaa bɛbam, na yɛwɔ awerɛhyem sɛ nea waka wɔ n’Asɛm mu a yɛmfa yɛn ani nhu mpo yɛ nokware.
3, 4. (a) Dɛn ne akokoduru? (b) Sɛ yɛpɛ sɛ yenya gyidi ne akokoduru paa a, ade biako bɛn na ɛbɛboa yɛn?
3 Sɛ yɛwɔ akokoduru na sɛ yehyia tebea a ɛyɛ den anaa ɛyɛ hu mpo a, yɛde ahoɔden bɛkasa anaa yɛbɛyɛ ade a yɛrensuro. Obi a ɔwɔ akokoduru wɔ ahotoso, ne bo yɛ duru, na onsuro sɛ ne gyidi nti obehu amane.—Mar. 6:49, 50; 2 Tim. 1:7.
4 Gyidi ne akokoduru yɛ su a yɛn nyinaa pɛ. Nanso ɛtɔ da bi a yɛbɛte nka sɛ yenni gyidi ne akokoduru a yehia. Bible ma yehu nnipa pii a wɔdaa gyidi ne akokoduru adi a yebetumi asuasua wɔn. Eyi nti sɛ yɛpɛ sɛ yenya gyidi ne akokoduru paa a, ade biako a ɛbɛboa yɛn ne sɛ yebesusuw nnipa yi bi nhwɛso ho.
NA YEHOWA KA YOSUA HO
5. Dɛn na na Yosua hia na watumi adi ɔman no anim?
5 Momma yɛnhwɛ nea esii bɛyɛ mfe 3,500 ni. Ná Yehowa agye Israelfo mpempem pii afi Egypt nkoasom mu ma odiyifo Mose adi wɔn anim mfe 40. Saa bere no na Mose adi mfe 120, na okogyinaa Bepɔw Nebo so too n’ani hwɛɛ Bɔhyɛ Asase no. Mose wui wɔ bepɔw no so, na Yosua besii n’ananmu. Na Yosua yɛ ɔbarima a ‘nyansa ahyɛ no mã.’ (Deut. 34:1-9) Saa bere no, na aka kakraa bi ma Israelfo no akɔfa Kanaan asase no. Sɛ Yosua betumi adi ɔman no anim a, na ohia Onyankopɔn nyansa. Bio nso na ɛsɛ sɛ onya Yehowa mu gyidi na ne bo yɛ duru na ne ho yɛ den.—Deut. 31:22, 23.
6. (a) Sɛnea Yosua 23:6 kyerɛ no, dɛn na ɛsɛ sɛ yenya akokoduru yɛ? (b) Dɛn na yesua fi Asomafo Nnwuma 4:18-20 ne Asomafo Nnwuma 5:29 mu?
6 Yosua daa nyansa, akokoduru ne gyidi adi, na yebetumi aka sɛ eyi hyɛɛ Israelfo no den bere a wɔne Kanaanfo koe mfe pii no. Ɛnyɛ ɔko bere mu nkutoo na na Israelfo no hia akokoduru; na wohia akokoduru a wɔde bɛyɛ nea Yosua ka kyerɛɛ wɔn no nso. Yosua rebewu no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Momma mo bo nyɛ duru na monhwɛ sɛ mubedi nea wɔakyerɛw wɔ Mose mmara nhoma no mu nyinaa so, na mommman nnkɔ nifa anaa benkum.” (Yos. 23:6) Yɛn nso yehia akokoduru a yɛde betie Yehowa bere nyinaa. Eyi ho hia paa titiriw bere a nnipa pɛ sɛ yebu Onyankopɔn mmara so. (Monkenkan Aso. 4:18-20; 5:29.) Sɛ yɛbɔ mpae na yɛde yɛn ho to Yehowa so a, ɔbɛboa yɛn ma yɛanya akokoduru.
NEA ƐBƐMA ASI YƐN YIYE
7. Dɛn na na ɛsɛ sɛ Yosua yɛ na wanya akokoduru na asi no yiye?
7 Ɛsɛ sɛ yesua Onyankopɔn Asɛm na yɛde yɛ adwuma; ɛno na ɛbɛma yɛanya akokoduru ayɛ n’apɛde. Saa na Yehowa ka kyerɛɛ Yosua sɛ ɔnyɛ bere a obesii Mose anan no. Ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Nea ehia ara ne sɛ wobɛma wo bo ayɛ duru na wo ho ayɛ den, na woahwɛ adi mmara a m’akoa Mose de maa wo no nyinaa so. . . . Mma mmara nhoma yi mmfi w’anom, na mmom kenkan na dwinnwen ho awia ne anadwo na woadi nea wɔakyerɛw wom nyinaa so. Woyɛ saa a, ebesi wo yiye na woayɛ w’ade nyansam.” (Yos. 1:7, 8) Yosua tiee afotu no na ‘esii no yiye.’ Yɛn nso sɛ yetie afotu yi a, yebenya akokoduru kɛse na asi yɛn yiye wɔ Onyankopɔn som mu.
Afe 2013 afe asɛm ni: “Ma wo bo nyɛ duru na wo ho nyɛ den . . . Yehowa wo Nyankopɔn ka wo ho.”—Yosua 1:9
8. Kyerɛwsɛm bɛn na woyii 2013 afe asɛm no fii mu? Saa asɛm no bɛboa wo dɛn?
8 Yebetumi aka sɛ asɛm a Yehowa san ka kyerɛɛ Yosua no hyɛɛ no den paa. Ɔkae sɛ: ‘Ma wo bo nyɛ duru na wo ho nyɛ den. Nsuro na mmɔ hu, efisɛ baabi a wobɛkɔ biara no, Yehowa wo Nyankopɔn ka wo ho.’ (Yos. 1:9) Yɛn nso Yehowa ka yɛn ho. Enti sɔhwɛ biara a yebehyia no, ɛnsɛ sɛ ‘yesuro anaa yɛbɔ hu.’ Asɛm a ɛho hia yɛn paa ni: “Ma wo bo nyɛ duru na wo ho nyɛ den . . . Yehowa wo Nyankopɔn ka wo ho.” Asɛm yi wɔ Yosua 1:9, na ɛno na wɔapaw sɛ 2013 afe asɛm. Akyinnye biara nni ho sɛ saa asɛm yi bɛhyɛ yɛn den asram a ɛwɔ yɛn anim no. Nnipa bi nso de wɔn nsɛm ne wɔn nneyɛe kyerɛe sɛ wɔwɔ gyidi ne akokoduru, na wɔn nhwɛso betumi aboa yɛn.
WƆDE AKOKODURU YƐƐ ONYANKPƆN APƐDE
9. Dɛn na Rahab yɛe de kyerɛe sɛ ɔwɔ gyidi ne akokoduru?
9 Bere a Yosua somaa akwansrafo baanu kɔɔ Kanaan no, aguaman Rahab de wɔn siei na ɔmaa atamfo de wɔn ani kyerɛɛ baabi foforo. Gyidi ne akokoduru a Rahab daa no adi nti, bere a Israelfo sɛee Yeriko no ɔne ne fiefo nyaa wɔn ti didii mu. (Heb. 11:30, 31; Yak. 2:25) Rahab gyaee ne brabɔne no yɛɛ nea Yehowa pɛ. Gyidi ne akokoduru a ɛte saa na aboa Kristofo pii ma wɔayɛ nsakrae wɔ wɔn asetenam ma Onyankopɔn agye wɔn atom.
10. Ɛyɛɛ dɛn na Rut bɛsom Yehowa? Nhyira bɛn na onyae?
10 Moabni Rut tenaa ase wɔ Yosua wu akyi, na ɔno nso de akokoduru som Yehowa. Na ne kunu yɛ Israelni, enti ɛbɛyɛ sɛ na onim Yehowa ho biribi. Na n’asebea Naomi te Moab asase so nanso ne kunu wu akyi no, osii gyinae sɛ ɔbɛsan akɔ Betlehem wɔ Israel. Bere a wɔnam kwan so rekɔ no, Naomi ka kyerɛɛ Rut sɛ ɔnsan nkɔ ne nkurɔfo nkyɛn, nanso Rut ka kyerɛɛ no sɛ: “Nhyɛ me sɛ mensan mfi w’akyi . . . Wo man bɛyɛ me man, na wo Nyankopɔn ayɛ me Nyankopɔn.” (Rut 1:16) Na ɛyɛ Rut aniberesɛm. Akyiri yi, Naomi busuani Boas waree Rut na wɔwoo ɔbabarima. Dawid ne Yesu nyinaa bɛyɛɛ Rut asefo. Ampa, sɛ obi da gyidi ne akokoduru adi a, Yehowa hyira no.—Rut 2:12; 4:17-22; Mat. 1:1-6.
NNIPA PII DE WƆN NKWA TOO WƆN NSAM!
11. Dɛn na Yehoiada ne Yehoseba yɛe a ɛkyerɛ sɛ wɔwɔ akokoduru? Dɛn na efi mu bae?
11 Onyankopɔn boa wɔn a wɔde n’apɛde di kan na wɔbɔ wɔn nuanom ho ban no. Sɛ yehu saa a, gyidi ne akokoduru a yɛwɔ yɛ kɛse. Nhwɛso biako ne Ɔsɔfo Panyin Yehoiada ne ne yere Yehoseba. Ɔhene Ahasia wui no, ne maame Atalia kunkum ahenemma no nyinaa ma ɛkaa Yehoas, na osii ne ho hemmaa. Nanso Yehoiada ne ne yere Yehoseba de wɔn nkwa too wɔn nsam de Ahasia ba Yehoas siei mfe asia. Afe a ɛto so ason mu no, Yehoiada de Yehoas sii agua so sɛ ɔhene na ɔma wokum Atalia. (2 Ahe. 11:1-16) Akyiri yi Yehoiada boaa Ɔhene Yehoas ma osiesiee asɔrefie no. Bere a Yehoiada wui no na wadi mfe 130, na wosiee no kaa ahene ho “efisɛ ɔyɛɛ adepa wɔ Israel, nokware Nyankopɔn som ne ne fie no ho.” (2 Be. 24:15, 16) Yehoiada ne ne yere akokoduru nti, wɔkoraa Dawid abusua a na Mesia no befi mu aba no so.
12. Dɛn na Ebed-Melek yɛe de kyerɛe sɛ ɔwɔ akokoduru?
12 Nhwɛso foforo ne Ebed-Melek. Na ɔyɛ opiani wɔ Ɔhene Sedekia ahemfie, na ɔde ne nkwa too ne nsam boaa Yeremia. Na Yuda mpanyimfo atutu agu ɔhene no asom sɛ Yeremia yɛ ɔmammɔfo. Enti ɔhene no maa wɔn kwan sɛ wɔnyɛ no nea wɔpɛ biara, na wɔde no kɔtoo atɛkyɛ mu wɔ abura bi mu sɛ onwu. (Yer. 38:4-6) Ebed-Melek kɔɔ Ɔhene Sedekia anim kɔsrɛ maa Yeremia. Ná egye akokoduru na Ebed-Melek atumi ayɛ saa efisɛ na ɔmanfo no tan Yeremia. Sedekia penee so na ɔmaa mmarima 30 kaa Ebed-Melek ho koyii Yeremia fii abura no mu. Onyankopɔn somaa Yeremia ma ɔkɔka kyerɛɛ Ebed-Melek sɛ, sɛ Babilonfo rebɛsɛe Yerusalem a, obenya ne ti adidi mu. (Yer. 39:15-18) Eyi ma yehu sɛ Onyankopɔn hyira wɔn a wonya akokoduru yɛ n’apɛde.
13. Dɛn na Hebrifo baasa no yɛe a ɛkyerɛ sɛ wɔwɔ akokoduru? Dɛn na yebetumi asua afi wɔn asɛm no mu?
13 Bɛyɛ mfe 600 ansa na Kristo reba no, Hebrifo baasa bi a wɔsom Yehowa daa gyidi ne akokoduru adi na wonyaa so akatua. Ɔhene Nebukadnesar boaboaa Babilon atitiriw ano na ɔhyɛɛ wɔn sɛ wɔnkotow sika honi kokuroo bi. Ɔhene no hyɛe sɛ, sɛ obi ankotow ohoni no a, wɔmfa no nto fononoo a ɛredɛw mu. Hebrifo baasa no ka kyerɛɛ Nebukadnesar nidi mu sɛ: “Yɛn Nyankopɔn a yɛsom no no betumi agye yɛn. Obeyi yɛn afi fononoo a ogya refram mu no mu, na obegye yɛn afi wo, ɔhene nsam. Na sɛ amma saa mpo a, ɔhene, yɛpɛ sɛ wuhu sɛ ɛnyɛ w’anyame na yɛbɛsom wɔn, na sika honi a wode asi hɔ no nso, yɛrensom no.” (Dan. 3:16-18) Sɛ wokan Daniel 3:19-30 a, wubehu anwonwakwan a Yehowa faa so gyee Hebrifo baasa yi. Ɛwom, yɛnhwɛ kwan sɛ biribi bɛba ma wɔde yɛn akɔto ogya fononoo mu, nanso yɛtaa hyia tebea horow a ɛsɔ yɛn gyidi hwɛ na ɛma ɛyɛ den sɛ yɛbɛsom Onyankopɔn. Nanso sɛ yenya gyidi ne akokoduru a, Onyankopɔn behyira yɛn.
14. Sɛnea Daniel ti 6 kyerɛ no, dɛn na Daniel yɛe a ɛkyerɛ sɛ ne bo yɛ duru? Dɛn na efi mu bae?
14 Onipa foforo a ɔdaa gyidi ne akokoduru adi ne Daniel. Bere bi n’atamfo ka kyerɛɛ Ɔhene Dario sɛ ɔnhyɛ mmara sɛ “obiara a obebisa onyame bi anaa onipa bi hɔ ade adaduasa yi, gye wo, ɔhene hɔ no, wɔbɛtow no akyene agyata amoa mu.” Bere a Daniel tee sɛ ɔhene no de ne nsa ahyɛ mmara no ase no, “ɔkɔɔ ne fie; nso na n’abansoro dan mu mfɛnsere a ɛkyerɛ Yerusalem no abuebue, na ɔkotow ne nkotodwe anim mprɛnsa da koro, na ɔbɔɔ mpae daa ase, ne Nyankopɔn anim sɛnea na ɔyɛ kan no ara.” (Dan. 6:6-10) Wɔde ɔkokodurufo Daniel kɔtoo agyata amoa mu, nanso Yehowa gyee no.—Dan. 6:16-23.
15. (a) Dɛn na Akwila ne Priskila yɛe de kyerɛe sɛ wɔwɔ gyidi ne akokoduru? (b) Yesu asɛm a ɛwɔ Yohane 13:34 no kyerɛ dɛn? Dɛn na Kristofo pii de akyerɛ sɛ wɔwɔ ɔdɔ a ɛte saa?
15 Bible ma yehu sɛ Akwila ne Priskila nso yɛɛ biribi a ɛkyerɛ sɛ wɔn bo yɛ duru. Ɛnka ade pɔtee a wɔyɛe, nanso Kyerɛwnsɛm no ka sɛ ‘wɔde wɔn kɔn too hɔ maa Paulo kra.’ (Aso. 18:2; Rom. 16:3, 4) Wɔde Yesu ahyɛde yi yɛɛ adwuma: “Mede ahyɛde foforo rema mo, sɛ monnodɔ mo ho; sɛnea medɔ mo no, mo nso monnodɔ mo ho saa ara.” (Yoh. 13:34) Na Mose Mmara no hwehwɛ sɛ obiara dɔ ne yɔnko sɛ ne ho. (Lev. 19:18) Ɛnde, dɛn nti na Yesu kae sɛ n’ahyɛde no yɛ “foforo”? Ɔdɔ a na Yesu reka ho asɛm no hwehwɛ sɛ obi tumi de ne nkwa to hɔ ma ne yɔnko sɛnea ɔyɛe no. Kristofo pii de ‘wɔn kɔn ato hɔ’ ama wɔn nuanom de akyerɛ sɛ wɔdɔ wɔn. Ɔkwan biako a wɔfa so yɛ saa ne sɛ wɔbɔ wɔn nuanom ho ban na atamfo anyɛ wɔn basabasa anaa wɔankum wɔn.—Monkenkan 1 Yohane 3:16.
Biribiara nni hɔ a na ɛbɛma tete Kristofo no agyae wɔn gyidi mu
16, 17. Sɔhwɛ bɛn na Kristo akyidifo bi hyiae tete no? Ɛnnɛ nso ɔkwan bɛn so na wɔasɔ Kristofo bi gyidi ahwɛ?
16 Tete Kristofo no som Yehowa nkutoo sɛnea Yesu yɛe no. (Mat. 4:8-10) Wɔanhyew aduhuam anhyɛ Roma ɔhempɔn no anuonyam. Na egye akokoduru na wɔatumi ayɛ saa. (Hwɛ mfonini no.) Owura bi a wɔfrɛ no Daniel P. Mannix kyerɛwee sɛ: “Ná Romafo taa sɔ ogya wɔ afɔremuka so si adiwo hɔ na ayɛ mmerɛw ama obi sɛ ɔbɛhyew aduhuam. Nea na ɛsɛ sɛ nneduafo no yɛ ara ne sɛ wɔde aduhuam bɛpetepete ogya no so. Sɛ wɔyɛ saa pɛ na wɔama wɔn adanse krataa sɛ wɔabɔ afɔre enti wɔmfa wɔn ho nni. Ɛyɛ a wɔka kyerɛ nneduafo no sɛ, sɛ wɔhyew aduhuam no a, ɛnkyerɛ sɛ wɔresom ɔhempɔn no, na mmom wogye tom kɛkɛ sɛ Roma ɔhempɔn no yɛ onyame. Nanso Kristofo dodow no ara amfa wɔn ti annye.”—Those About to Die.
17 Ɛnnɛ nso Kristofo afa tebea a ɛte saa mu. Nasi nniso ase no, wɔde Kristofo pii guu nneduaban mu. Ná owu da hɔ retwɛn wɔn. Nea na ɛsɛ sɛ wɔyɛ ara ne sɛ wɔde wɔn nsa bɛhyɛ krataa ase sɛ wɔnsom Yehowa bio na wɔafa wɔn ho adi. Nanso Kristofo dodow no ara amfa wɔn nsa anhyɛ ase. Bere a ɔko gyina mu wɔ Rwanda no, Adansefo a wɔyɛ Tutsifo ne Hutufo de wɔn nkwa too wɔn nsam bɔɔ wɔn nuanom Kristofo ho ban. Egye akokoduru ne gyidi na obi atumi ayɛ biribi a ɛte saa.
KAE SƐ YEHOWA KA YƐN HO!
18, 19. Bible mu nnipa bɛn na wɔdaa gyidi ne akokoduru adi a wɔn nhwɛso betumi aboa yɛn wɔ asɛnka adwuma no mu?
18 Ɛnnɛ yɛreyɛ adwuma a ɛso sen biara a Onyankopɔn de ahyɛ ne nkoa nsa wɔ asase so. Ɛno ne Ahenni asɛmpaka ne asuafoyɛ adwuma no. Eyi yɛ akwannya kɛse ma yɛn. (Mat. 24:14; 28:19, 20) Anigyesɛm koraa ne sɛ Yesu atwa sa kɛse bi ato hɔ ama yɛn! “Otutuu akwan kɔɔ nkurow mu ne nkuraa ase kɔkaa asɛm no, na ɔpaee mu kaa Onyankopɔn ahenni ho asɛmpa” no. (Luka 8:1) Egye gyidi ne akokoduru na yɛatumi aka Ahenni no ho asɛm sɛnea Yesu yɛe no. Onyankopɔn betumi aboa yɛn ma yɛanya akokoduru te sɛ Noa. Bible kyerɛ sɛ na Noa yɛ “trenee sɛnkafo,” na ɔkaa asɛm no wɔ “amumɔyɛfo wiase” a nsuyiri rebɛsɛe no mu.—2 Pet. 2:4, 5.
19 Mpaebɔ boa yɛn ma yɛyɛ asɛnka adwuma no. Bere a atamfo taa Kristo akyidifo bi no, wɔbɔɔ mpae sɛnea ‘wɔde akokoduru bɛka Onyankopɔn asɛm no,’ na obuaa wɔn mpaebɔ no. (Monkenkan Asomafo Nnwuma 4:29-31.) Sɛ wusuro sɛ wobɛka asɛm no wɔ afie afie a, bɔ Yehowa mpae sɛ ɔmma wo gyidi ne akokoduru kɛse, na ɔbɛboa wo.—Monkenkan Dwom 66:19, 20. *
20. Henanom na wɔtaa Yehowa asomfo akyi?
20 Ɛnyɛ mmerɛw sɛ yɛbɛyɛ Onyankopɔn apɛde wɔ wiase bɔne yi mu. Nanso ɛnkaa yɛn nko; Onyankopɔn ka yɛn ho. Ne Ba a ɔyɛ asafo no Ti no nso taa yɛn akyi. Bio nso yɛn nuanom Yehowa Adansefo bɛboro 7,000,000 ka yɛn ho. Momma yɛne wɔn nyinaa nkɔ so nna gyidi adi na yɛnka asɛmpa no. Afe 2013 afe asɛm yi bɛboa yɛn ma yɛayɛ saa: “Ma wo bo nyɛ duru na wo ho nyɛ den . . . Yehowa wo Nyankopɔn ka wo ho.”—Yos. 1:9.
^ nky. 19 Sɛ wopɛ nnipa foforo a wɔdaa akokoduru adi a, hwɛ asɛm a ɛne “Ma Wo Bo Nyɛ Duru na Wo Ho Nyɛ Den” wɔ February 15, 2012, Ɔwɛn-Aban mu.